Adeegyada | Suomen somalialaisten liitto
Ururka midnimada soomaaliyeed wuxuu jiheyn iyo taloba siiyaa shakhsiyada iyo ururada soomaaliyeed ee Finland. Ururku wuxuu xubnihiisa u qabtaa seminaaro, tababar shaqo, shaqo raadin iyo wixii uu shakhsigu u baahan yahay ku noolaanta Finland. Halkan ka akhriso kalandharka dhacdooyinka soo socda kana soo qeybgal. Adeegyada ururka waxaa ka mid ah macluumaad bixinta dhinaca waxbarashadata iyo shaqo helida . Wax qabadka ururka oo faahfaahsan halkan ka akhriso.
Anti-marginalization- Mashruuca ah waxaa lagu fuliyay casimada wadanka iyo magaalooyinka kala ah Oulu iyo Vaasa. Waxaa mashruuca la fuliyay 2014 illaa 2015. Mashruuca shaqooyinka uu qabtay waxaa ka mid ahaa in dhalinyarta iyo dumarka loo qabtay gooba wax loogu soo jeediyo, mowduucyada ugu waaweeynna eey ahaayeen: Waxbarashada, shaqaaleeysinta iyo tartamo lagu boorinaayo dhalinyarta. Waxaa kaloo laqabtay barnaamij ah Dariska la shaxeey oo loogu talagalay ineey isku bartaan dadka soomaalidda iyo finishkaba si eey isfahankooda iyo wadashaqeeyntooda u hagaagto.
Soke-hanke waa mashruuc loogu talagalay inuu dhiso oo uu xoojiyo ururada ka tirsan dallada uruka golaha midnimada Somaaliyeed ee Finland. Mashruuca waxaa maal galiyay RAY oo ah ururka lacagaha ee (Raha-automaattiyhdistys). Waxii 2012 ka danbeeyay uruka golaha midnimada Somaaliyeed wuxuu bilaabay inuu hormariyo qoraalada ururada, xifdinta qoraalada, sida loo diyaariyo qoraalada mashruucyada iyo sida sharciyda iyo dhaqaalaha ururada loo haayo. Soke-Mashruuca waxaa loogu talagalay in eey ururada eey ku dhiiriyaan wada shaqeenta xubanaha kala duwan iyo waliba kobciyaan hoosha ururada ka socoto.
RAY ayaa waxeey maalgalisay mashruuca dhalinyarada Soomalidda looga hortagaayo in ay mujtamaca ka dhacaan oo ay ku biiraan kuwa dambiilayaasha iyo xagjirnimada. Mashruuca waxaa la fulin doonaa 2016-2018 Dhalinyarada mashruuca quseeyo waa 15-29 jiro. Waxaan qabandoonaa seminaaro iyo työpaja.
In aan caawino oona ka hortagno in dhalinyarada noqoto xagjir
Inaan garab ku siino dhalinyarada ineey waxbarashada sii wataan
Inaan garab ku siino dhalinyarta sidii loo shaqaaleeysiin lahaa
Inaan dhalinyarta u sameeno meel ay ku qaataan waqtigooda fasaxa ah
Inaan dhalinyarada ku dhiiri galino ineey ka qeeybqaataan arimaha bulshada